Window & gonhi Aluminium Series
Aluminium Indasitiri Nhau
Aluminium Fomu Basa
Huajian Aluminium Indasitiri Dhizaini Center yakabudirira kuzivikanwa se "National Industrial Design Center"
na admin pa 21-11-30
Nguva pfupi yadarika, Bazi reIndasitiri uye Ruzivo rweTekinoroji yakazivisa runyorwa rwechishanu batch yenyika maindasitiri edhizaini nzvimbo. Huajian Aluminium Industrial Design Center yakabudirira kuzivikanwa se "National Industrial Design Center". Yakave iyo yega bhizinesi i...
Nzira yekuziva sei kunaka kwepoda spray coating
na admin pa 21-11-26
Nekuvandudzwa uye nekuwedzera kwehupfu hwekuputira, kudiwa kwemusika kunowedzera, mhando yehupfu yekupfapfaidza coating yakatanga kusaenzana. Saka tinofanira kusiyanisa sei yakanaka kana yakaipa poda coating? Chekutanga, Chitarisiko chekuzivikanwa nzira: 1, Inzwa Yakanaka poda inonzwa inofanira kunge iri silky yakatsetseka, ...
Plastic-simbi magonhi nemahwindo zvakabuda kubva kune makuru mukati memakore gumi chete, Kupisa kunokwanisa kugara kwenguva yakareba sei Kupisa kwearuminiyamu magonhi nemahwindo?
Kune chinhu, kana mutengo waparara uye musika waparara, hausi kure nerufu. Funga nezve budiriro trajectory yealuminium alloy gonhi uye hwindo indasitiri, uye ini ndinonzwa zvakafanana ichokwadi. VaChinese vane hunyanzvi: kwete kugadzira zvigadzirwa zvakanaka, asi kuchengetedza mitengo yakaderera. Iyi ndiyo nyaya i...
Kubva pakunzwisisa kwekutanga kweprofile kusvika pakugadzirwa, nzwisisa ruzivo rwekutanga rwealuminium alloy magonhi nemahwindo!
Kubatanidza nemaitiro ehupamhi hwemadziro emadziro uye yakakwirira alloy kuumbwa kwebhiriji rakaputsika, inokodzera nzvimbo dzepamusoro dzekugara dzezvivakwa zvepamusoro. Iyo ine kumira kwakanaka kumhepo kudzvinyirirwa uye inotakura-inotakura uye yakanaka yekupisa yekupisa, saka mahwindo ebhiriji akaputsika ari al...
Kushanda kweindasitiri yealuminium kubva muna Ndira kusvika Gunyana 2021
Imwe ndiyo kukura kwakadzikama kwezvinobuda. Zvinoenderana nedata kubva kuNational Bureau of Statistics, kubva muna Ndira kusvika Gunyana, kubuda kwealumina, electrolytic aruminiyamu, uye aruminiyamu yaive 58.84 miriyoni matani, 29.15 miriyoni matani, uye 44.78 miriyoni matani, zvichiteerana, inomiririra gore negore kuwedzera. ..
Mitengo yepamusoro yekugadzira yakaita kuti Alumina Makambani arasikirwe nepamusoro pe27% yePurofiti
Kubva 2021, Iyo Electrolytic Aluminium indasitiri ine mutengo wakakwira uye purofiti yakakwira yave kukwezva kutariswa kwakawanda, uye purofiti patani patani yearuminiyamu yakachengetwa pamwero wepamusoro we5,000 CNY, zvichiita kuti aruminiyamu ye electrolytic ave mukundi mukuru muindasitiri yealuminium. . H...
Mitengo yealuminium yakakwira rekodhi mumakore gumi nematatu! Kugadzirwa kwealuminium kwakatarisana nedambudziko risati ramboitika here?
na admin pa 21-10-16
The Financial Associated Press (Shanghai, mupepeti Xiaoxiang) yakashuma kuti kubva kumagaba edoro kuenda kumaPhones, aruminiyamu haipatsanurike munzvimbo dzakawanda dzeindasitiri yepasi rose. Nekudaro, iyi simbi yeindasitiri zvakare isimbi inopinza simba panguva imwe chete. Vemukati vanowanzo taura vachiseka kuti aluminium ...
Kuvhurwa kwe13th China magonhi epamba nemahwindo Expo
Mangwanani eGumiguru 12, 13th China (Weifang) gonhi repamba nehwindo Expo, iyo yakagara kwemazuva matatu, yakavhurwa zvakanaka muLinqu, Shandong, guta guru reindasitiri yealuminium muChina. MaElites kubva kumusuwo nemahwindo indasitiri uye vanhu vanobva kwakasiyana siyana kubva kumativi ese enyika gat...
SHANDONG HUAJIAN ALUMINIUM GROUP CO., LTD 2021 landmark project display
Hungwaru hwakadzika mumusika, hunyanzvi hunotsanangura zviyero, uye ruzivo rwunogadzira mhando. Huajian Aluminium Boka yagara yakanamatira kune yemhando yemhando ye "standard, kukwenenzvera, uye zero kukanganisa" uye pfungwa yebasa re "hunyanzvi, kutarisa, ...
Chinyorwa chakakosha: Magnesium nesilicon zviri kukwira mudenga zvakare! Magnesium 71750CNY/T, mutengo wealuminium wekugadzirisa wakawedzera mari yekugadzira.
Nekuti magnesium nesilicon ndizvo zvekuwedzera zvinhu zvealuminium alloy, nekukurumidza kusimuka kwemagnesium nesilicon, mutengo wekugadzirisa chigadzirwa chealuminium kugadzira kambani inokwira, zvichikonzera mutengo watove wakakwira wezvigadzirwa zvealuminium kugadzira, zvakanyanya kuoma kune yakadzika compa. .
Huajian aluminium alloy yekuvaka maprofiles akapasisa chitupa chenyeredzi nhatu chezvigadzirwa zvegirinhi zvekuChina zvekuvaka.
na admin pa 21-09-15
Nguva pfupi yadarika, idzo mhando shanu dzealuminium alloy ekuvaka profiles dzakagadzirwa neHuajian Aluminium Group zvakabudirira kupasa ongororo yenyeredzi nhatu dzezvigadzirwa zveGreen zvekuvaka zvekuChina. Nyanzvi kubva kuchikwata chekuongorora dzakauya kuHuajian Aluminium kuzoitisa yakazara uye yakasimba r...
GROUP | HUAJIAN IMPRESSION • MOBLE FONI PHOTOGRAPHY EXHIBITION
2021 igore remakumi maviri nerimwe reShandong Huajian Aluminium Group Co., LTD., rinova zvakare gore rekutanga rechirongwa chemakore mashanu cheboka. Kuitira kuti mhemberero ive neruvara, yakasiyana-siyana uye hunhu hweHuajian, iyo "Impression of Huajian" nharembozha mafoto...
Huajian Aluminium Indasitiri Dhizaini Center ...
Nzira yekuziva sei kunaka kwehupfu spr ...
Plastic-simbi magonhi nemahwindo zvakabvisa ...
Runhare: 0536 335 6778
Kero: No.5188 Donghuan Road, Linqu County, Shandong Province, China
© Copyright - 2010-2020 : Kodzero Dzose Dzakachengetedzwa. Hot Products - Sitemap
Aluminium Sliding Window Design, Aluminium Clad Wood Window, Powder Coating Casement Window Uye Door, Aluminium Window Frame Dhizaini, Farbrication Window Uye Door, Aluminium Shutter,